Tourismleaderhip: UNWTO Executive Council inofanirwa kugadzirisa kukanganisa
Location: musha » Kutumira » Associations » Tourismleaderhip: UNWTO Executive Council inofanirwa kugadzirisa kukanganisa
Tourism yakanangana zvakananga nekuchengetedzwa kwenyika, kutaurirana, uye kudyidzana pakati pevanhu. Tourism inofanira kuva nechigaro patafura yepasi rose, uye UN World Tourism Organisation (UNWTO) ndiyo chikuva cheiyo mukati meUnited Nations. Mutungamiriri weiyi UNWTO chikuva angasarudzwa sei neboka revamiriri venyika vane hanya zvakanyanya nekutora matikiti emutambo wenhabvu wakakurumbira, vari kutevera mirairo yegurukota ravo rekune dzimwe nyika, uye pamwe saka havafarire hurukuro nekuchinjana, pamberi kuvhota mumwe munhu munzvimbo yepamusoro soro yeUN muindasitiri yekushanya neyekushanya?
Izvi ndizvo chaizvo zvakaitika muMadrid panguva yekupedzisira musangano weUNWTO Executive Council, uye zvinoita kunge munhu mumwe chete ari kuedza kuzvigadzirisa. Murume uyu ndiDr.Walter Mzembi, gurukota rezvekushanyirwa nekugamuchira vaeni kubva kune zvinonzi nevamwe inyika dzisingafarire zvematongerwo enyika - Zimbabwe.
Chatinofanira kudzidza pano ndechekuti haisi yezve nyika inomiririrwa nemurume uyu, iri pamusoro penyaya ine hunhu.
eTurboNews yakataurwa zvakadzama nezve nhabvu nhume dzemutambo dzakakokwa kumumiriri weGeorgia eTN yakaita ongororo yakasimbisa zvakanyanyisa kuenda kumutambo wenhabvu semumiriri wekuvhota uye kugamuchira kukokwa nemumiriri ari kutsvaga vhoti yako, inyaya yakajeka yechiokomuhomwe.
All Executive nhengo dzenyika - Angola, Azerbaijan, Bahamas, Bulgaria, China, Costa Rica, Croatia, Democratic Republic of the Congo, Ecuador, Egypt, France, Germany, Ghana, India, Iran (Islamic Republic of), Italy, Japan, Kenya , Mexico, Morocco, Mozambique, Peru, Portugal, Republic of Korea, Saudi Arabia, Serbia, Seychelles, Slovakia, South Africa, Spain, Thailand, Tunisia, neZambia - vaiziva kwazvo nyaya dzekupokana dzinovhotera itsva Sarudzo yeUNWTO.
Panguva yemusangano wakarambidzwa wakagadzwa nemutemo saka nhengo dzinovhota dzeKanzuru yeKanzuru dzinogona kukurukura nezvezvikwanisirwo uye kuratidzwa kwevanokwikwidza mumiriri weFrance angangodaro akati: "Takanzwa zvakakwana, ngatiendei kunovhota." Aida kusvetuka nhaurirano pamusoro pekuratidzwa uye kugona kwevadzidzi vakakwikwidza chinzvimbo cheUNWTO Secretary General. Ruzivo rwakatambirwa neTN rwakasimbisa kuti pakange pasina kufamba kwepamutemo uye pakange pasina rwechipiri kufamba. Panzvimbo iyoyo, pakanga paine runyararo nevamiriri veKanzuru yeKanzuru apo mumiriri weFrance paakakurudzira kuvhota pasina hurukuro nekuti nguva yakanga yapera. Dai ichi chaive chokwadi, zvingadai zvaingova kusaremekedza kusava nenharo, kunyanya mushure memwedzi yese yekushanda nesimba ava vavhoterwa vakaisa musarudzo. Izvo zvaive zvakare zviri pachena kwete kuteedzera chaiyo protocol kuti chikumbiro hachina kuitwa uye kupihwa rutsigiro kuvhota kuti gakava racho rinofanirwa kubvutwa pakutanga here.
Nyika inoda vatungamiriri. Vatariri vezvekushanya, kunyanya avo vakasarudzwa kugara paUNWTO Executive Council, vane basa kwete kungo nyika yavo chete asi nenyika yepasi rose yekufamba nekushanya. Kuita kuti zvinhu zviwedzere kuoma, vamiriri vamwechete kumusangano wekare weExecutive Council muLuxor, Egypt, vakavhota kurambidza zvese zvakarekodhwa panguva yekukakavadzana, saka paisazove nechinyorwa chepamutemo chekuti hurukuro iyi yakamboitika. Zvichida nharo yakanaka yepamutemo yekuongorora kana mutemo wakadaro wekududzira unobvumidzwa chaizvo kusangano reUN rakarongeka.
Kupfupisa, uyo akasarudzwa kubva kuGeorgia, Zurab Pololikashvili, Mumiriri weGeorgia kuHumambo hweSpain, akasarudzwa pasina hurukuro yehurukuro yake, uye hunhu hwake hauna kubvunzwa. Iye akasarudzwa akabvumidzwa kukoka Executive Council kuvakuru kumutambo wenhabvu musangano wemusangano usati waitwa, uye vamiriri vake vakatenderedza matikiti kune vangango tarirwa vateereri.
Panguva yesarudzo, pakanga pasina kurekodhwa kwegakava - gakava iro muchokwadi harina kumboitika, asi akasarudzwa akapinda uye pamwe yakakanganisa musangano wakarambidzwa uyu kuburikidza neSKYPE kubva kuhotera yekutandarira yeCasa, izvo zviri pachena zvinopesana nemitemo uye pamwe zvinokonzeresa danho rekusaita gakava.
Nyika irikuenda mukusagadziriswa nguva, uye kushanya kunoda vatungamiriri. Vamiriri veKanzuru yeKanzuru vakaita chikanganiso kuvhota pasina gakava uye vazhinji vacho vaisaziva kuti vaitariswa paSKYPE nemunyori Mukuru weSecretary.
Vamiriri veUNWTO Secretary General - VaMárcio Favilla vekuBrazil, VaJaime Alberto Cabal Sanclemente vekuColombia, Mai Young-shim Dho veRepublic of Korea, - vanofanirwa kuita zvakanaka uye kumira kumashure kwekuyedza kwaWalter Mzembi kwekusasimbisa Zurab mu China. Hazvina kunonoka kuti nhengo dzeExecutive Council dzibvume chinyararire chikanganiso uye kukurudzira nyika dzavo kuti dzirege kuvhotera Zurab.
Izvi zvinotora hutungamiriri, uye zvinotora zvivindi, uye zvaizoratidza kune nyika kuti vamiriri vakabatana mukuda kugadzirisa iko kukanganisa. Izvo zvaizodzosera iyi nyaya kuExecutive Council iyo yaizowana mukana wekusimbisa kana kugadzirisa vhoti yavo yekutanga.
Iko hakuna kunyadziswa pakuita izvi, asi zvingave zvinonyadzisa uye zvinonyadzisa kushanya kwepasirese kana kusimbiswa kweasarudzwa iyezvino kukaitika muChengdu sekunge raive bhizinesi senguva dzose, pasina mibvunzo yakabvunzwa.
Kunyengedza kunotarisirwa kweGurukota reGeorgia, Giorgi Kvirikashvili, haifanire kukurudzira vatungamiriri venyika yekushanya kuti vasinei nekugadzirisa chikanganiso.Kvirkashvili akarongerwa kuenda kumusangano unouya weUNWTO General kuChengdu China munaGunyana.
Runyararo rwenyika rwuri panjodzi, uye kushanya indasitiri yerunyararo. Tourism inofanira kuve nenheyo yayo pane yakasimba tsoka. Pasi pehutungamiriri hweMunyori Mukuru akasarudzwa zviri pamutemo kudiwa kwekushandura maitiro nemitemo muUNWTO kudzivirira chiitiko chakadai mune ramangwana chakakosha.
Hapana tag kana ichi post.
Guam kushanya: Kufanana kutyisidzira kwakasiyana zuva uye Guam mahombekombe akabatikana nhasi
Vashanyi vekunze muItari: mamirioni masere anouya kugungwa